अस्ट्रेलियाबाट गुरु मञ्जरी- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
अस्ट्रेलियाबाट गुरु मञ्जरी
मंसिर ११, २०७५ नारायण खड्का
अस्ट्रेलिया — विभिन्न ७ देशमा रहेका गुरुपुरोहितहरु मिलेर गुरु मञ्जरी नामक संस्थाको सुरुवात गरेका छन् । यो संस्था नेपाली गुरुपुरोहित तथा पण्डितहरु मिलेर सुरु गरिएको पहिलो सामाजिक संस्था भएको दाबी गरिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपाली परम्परागत, धार्मिक र सांस्कृतिक कर्महरु गराउनका लागि सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ संस्था स्थापना गरिएको उनीहरुले बताएका छन्।
अस्ट्रेलियाबाट औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको संस्थामा नेपाल, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, क्यानाडा र न्युजिल्याण्डका २१ जना पण्डित तथा पुरोहितहरु रहेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका संयोजक प्रकाश ढोडारीले ज्योतिषी परामर्शका साथै वास्तु सम्बन्धि विविध सेवाहरु समेत प्रदान गरिने जानकारी दिए।
विदेशमा रहेका नेपालीहरु आफ्नो धर्म र परम्पराप्रति जागरुक रहेकाले समेत उनीहरुलाई सहज र सरल सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ संस्थाको स्थापना गरिएको मेलबर्नका ज्योतिषविद् राजु शर्मा भेटवालले जानकारी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार संस्थाले विवाह गर्न चाहने र कानुनी रुपले योग्य युवायुवतीहरुलाई उपयुक्त प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ‘मेरो स्वयंबर’ नामक संस्थाको समेत शुरुवात गरिएको छ।
संयोजक ढोडारीले मेरो स्वयंबरको उद्देश्य कसैलाई विवाह गराइदिन विदेश ल्याउने वा भिषा मिलाइदिने लगायतको नभई विवाह गर्न चाहनेहरुका लागि मध्यस्थताको मात्र काम गर्नु रहेको प्रस्ट पारे।
संस्थामा न्युयोर्कबाट उद्धब शास्त्री र रमनराज शास्त्री, वासिङटनबाट राजेन्द्र खनाल, टेक्सासबाट भवानीशंकर शास्त्री, क्यालिफोर्नियाबाट बासुदेव घिमिरे रहेका छन्। यसैगरी नेपालबाट मुकुन्द शर्मा, बेलायतबाट दुर्गाप्रसाद पोखरेल र जगदिश पौडेल, क्यानाडाबाट धर्मदाश शास्त्री र जगदिश गैरे, न्युजिल्याण्डबाट घनश्याम काफ्ले र जापानबाट भगिरथ सापकोटा लगायतका पण्डितहरु रहेका छन्।
संस्थाले हरेक देशका नियम कानुनमा रही धार्मिक, परम्परागत र सांस्कृतिक कर्महरुमा सहयोग पुर्‍याउने जानकारी दिइएको छ।
प्रकाशित : मंसिर ११, २०७५ १६:५६
युएईको घुम्ने कुर्सीमा नेपाली
मंसिर ११, २०७५ मेघराज सापकोटा
स्याङ्जाको मल्याङ्कोटका प्रदीप पौडेल । उनी अमेरिकी बैंक, सिटी बैंक युएईको भाईस प्रेसिडेन्ट छन् ।
धेरै पटकको प्रयास बाबजुद मित्र सन्तोष प्रसाईंलाई साथ लिएर म उनको घर पुगें । दुबईको हाइफाइ क्षेत्र द ग्रीन्स भिलेजमा उनी २ कोठे फ्ल्याटमा बस्छन्, श्रीमती र २ जना छोराछोरीसहित । कति भाडा तिर्नु हुन्छ नि? जसै घर भित्र छिरें, मैले सोधे । उनी मुस्कुराए र भने, ‘आफ्नै हो भाडा तिर्नु पर्दैन ।' यसो भनिरहँदा उनको मुहारमा कता कता संकोच माने जस्तो देखिन्थ्यो । मलाई त दुबईमा हलिवूड र बलिवूडका कलाकारको मात्रै फ्ल्याट होला भन्ने लाग्थ्यो । नेपालीकै भए पनि घरानीया ब्यापारीहरुको होला जस्तो लाग्थ्यो । प्रसाईंले बीचैमा बोले, ‘यो २ कोठे फ्ल्याटमा आाफै बस्नु हुन्छ, पल्लो घरमा भएको १ कोठे फ्ल्याट चाही भाडामा लगाउनु हुन्छ ।’
‘कक्षा ७ मा सिद्धार्थ बनस्थलीमा पढ्थें । काठमाडौंको बाल मन्दिरले राष्ट्रिय स्तरको कथा प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो । त्यो कथा प्रतियोगितामा प्रथम भएँ । म प्रथम भएको कथा सुन्नु हुन्छ?' उनी कथा सुनाउन थाले । ‘म सुतिरहेको थिएँ । सुत्दा सुत्दै म एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भएछु । त्यसपछि बेलायतको बिद्यार्थी पढ्ने ईटन कलेजबाट छात्रबृत्ति पाएर बेलायत गएछु । सफा कलेज, चिल्लो टाइल्स र घरहरु देखेर म मक्ख पर्दै हिडिरहेको थिएँ । चिप्लिएर लडें । ऐया भनेको त के भो बाबु भन्दै बुवा पो आउनु भयो । मेरो कथा यही थियो । शायद यही सपनाको कथाले मलाई अमेरिका पुर्‍यायो’ उनले भने ।
अमेरिकामा अध्ययन सकेर बस्दा पनि उनी खुशी हुन सकेनन् । सधैं अर्काकोमा काम गरेर दोश्रो दर्जाको नागरिक हुनु भन्दा त बरु नेपालमै गएर केही गर्ने सोच पलायो । २०५२ सालमा अमेरिका पुगेका उनी २०६० सालमा नेपाल फर्किए । नेपालमा भरखर फस्टाउदै गरेको आईटी क्षेत्रमा लागेर 'एक्स्पर्ट ग्रुप डि २ हवकी' भन्ने कम्पनीमा ३२ जना कामदारको चीफ अफिसर भएर काम गरे । आफ्नै ब्यवसायको पनि हिसाब किताब, नाफा घाटा, आर्थिक प्रतिबेदन हेर्न अरुलाई खेताला खोज्न पर्ने भएकोले उनलाई एमबीए पढ्न मन लाग्यो । उनी अर्ध छात्रबृत्तिमा एमबीए पढ्न बार्सिलोना पुगे । २ वर्षे एमबीए पढ्दा पढ्दै उनलाई सिटी बैंकले काम गर्न लण्डन बोलायो । पढाई सकेपछि उनी बर्सिलोना छोडे र लण्डन लागे ।
‘दुबई आएर राम्रो निर्णय गरें जस्तो लाग्छ’ उनी भन्छन्, ‘केही समय पहिले बुवा बिरामी हुनु भएको थियो । यहीबाट डाक्टरको ‘अपोइन्टमेन्ट’ फिक्स गरें । सल्लाह मागें । डाक्टरको सल्लाह अनुसार नै सरर ४ घण्टामा नेपाल गएर बुवाको सानो अपरेसन गरेर केही दिन पछि फर्कें । अमेरिका वा लण्डन भएको भएयति सजिलोसँग त्यो सम्भब थिएन ।'
सम्पत्ति चाही कति कमाउनु भो? उता भन्दा यता थोरै कमाउनु भयो कि? ‘कहाँ हुनु, दुबई नबसेर अमेरिका वा युरोप बसेको भए आर्थिक रुपमा जति सफलता हाँसिल गरेको छु, त्यति सकिन्न थियो' उनले ठोकुवा नै गरे, 'मैले दुबई बसेर आर्थिक प्रगति गर्न कुनै गलत कार्य गर्नु परेको छैन । बरु धेरै मेहिनत गरेको छु ।' कस्तो राम्रो कुरा । दुबई बसेर हुण्डी र सुण्डी (अबैध सुनको कारोबार) गर्नेहरुले उनीबाट सिक्न जरुरी छ ।
‘अर्को कुरा तपाईंलाई थाहा छ ? दुबईमा तपाईंको जति तलब हुन्छ नि त्यति नै बैंकमा जान्छ र त्यती नै बचत गर्न सक्नु हुन्छ' उनी भन्छन् । युएई धेरै कुरामा ट्याक्स फ्री देश हो । दिनरात हड्डी घोटेर तपाईंले कमाएको पैसा सरकारलाई तिर्नु पर्दैन । सम्पत्ति कर लाग्दैन । आयकर तिर्नु पर्दैन । युरोप र अमेरिकामा राज्य हेरिकन ३३ देखी ५० प्रतिशत भन्दा बढी त ट्याक्स तिर्नु पर्छ । त्यति ट्याक्स तिरे पछि सुबिधा त पाउनु पर्‍यो । त्यो त तपाईंकै पैसा हो नि ।
‘अब धेरै बिदेश बस्ने हैन, बरु तपाईं पनि फर्कनुस् नेपालमै केही गर्नु पर्छ’ बिदा हुने बेला उनी भन्दै थिए, ‘बिदेशमा सिकेको सीप र ज्ञानलाई नेपालको बिकासमा लगाउन पाए आनन्द लाग्ने थियो । अमेरिका बसेको भए उतै हराउँथे होला, उतैको नागरिक बन्थें होला, उतैको पासपोर्ट बोक्नु र नागरिक हुनुमा गर्व गर्थें होला, तर कहिल्यै पनि त्यसो गर्न मन लागेन । अब त अति भयो, बिदेशको बसाइ पनि । नेपालमै केही गर्न मन लागेको छ । अब छिट्टै नै नेपाल फर्कन्छु होला ।'
‘३ डी’छोडौं, ‘३ एस’ रोजौ । पौडेलजीलाई हेर्नुस् त ।
प्रकाशित : मंसिर ११, २०७५ १६:३२